Arabia yakarukwa ngowani, akasiyana mapatani uye mavara, saizi: 54-58CM, inowanzo shandiswa kupfekwa kwezuva nezuva nevaMuslim, yakagadzika uye yakanaka.
Ngowani yakapfava chena yeArabia Yakarukwa. Yakagadzikana elastic yakavhurika knit uye yakasimba yakarukwa musanganiswa dhizaini 100% donje chigunwe chivharo. Yepamusoro-mhando-yakarechedzwa neruoko Arabian Knitted Hat. Kune hukuru uye hukuru hwemwana kusarudza kubva. Kune vana vadiki, tinokurudzira kusarudza SMALLL yevana uye XS kana XXS yevadiki. Mazano ekutarisira: geza nemaoko uye urembera kuti uome.
Yakasarudzika yakagadzirwa nemaoko yakarukana yakasimba kufi hat
Yakaganhurwa edition-yakagadzikana uye yakapfava kunzwa
Kune 7 saizi, kubva paXXS kusvika 2XL
Zvinokurudzirwa kushambidza nemaoko / kusungirirwa kuti uome kana kuoma kuchena
Yakanakira vanhu vane mhanza, varume nevakadzi
Ruzivo rwekutumira ****Tinowanzo takura zvinhu pazuva rimwe chete kana zuva rinotevera rekushanda. Isu tinorongedza zvigadzirwa nekungwarira kuti tisakuvadzwa uye tive nechokwadi chekutumira kwakakodzera. Maodha mazhinji anotumirwa kuburikidza neUSPS, asi mamwe anotumirwa kuburikidza neFedEx kana UPS, zvichienderana nekuwanikwa uye nguva yekutumira kunzvimbo yevatengi vedu. Kana iwe uchida masevhisi akakosha, ndapota taura nesu usati waisa odha kuti tive nechokwadi chekuti tinogona kuzadzisa zvaunoda.
Zvakapfuura: Mesh Akanyanya Kuda Vhiki Arabian Hat
Wool Kufi, Best Muslim Cap, Ciput Hijab, Hijab Dupatta, Muslim Cap Black, Mens Mosque Hats,